Khabar Kantipur » ड’नलाई मन्त्री बनाएपछि प्रहरीको शिर नि’हुरियो….
ड’नलाई मन्त्री बनाएपछि प्रहरीको शिर नि’हुरियो….
ड’नलाई मन्त्री बनाएपछि प्रहरीको शिर नि’हुरियो
काठमाडौं । गुन्डागर्दीको आरोपमा प्रहरीले पटक –पटक पक्राउ गरेका दीपक मनाङे(राजीव गुरुङ) मन्त्री बनेपछि प्रहरीको शिर नि’हुरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मनाङेलाई खेलकुद मन्त्रीमा नि’युक्त गरेका हुन् ।
मनाङेले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मत हा’ल्ने भएपछि सरकार जो’गाउन उनलाई मन्त्री बनाइएको हो । ड’नलाई मन्त्री बनाएकोमा सामाजिक सञ्जालमा च’र्काे आ’लोचना भइरहेको छ । अझ, प्रहरी अधिकारी च’कित भएका छन् । ‘अब ड’नलाई स्या’लुट गर्नुपर्ने दिन आए,’ जिप्रका कास्कीका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्,‘अब हामीले कुन म’नोबलले काम गर्ने ?’
मनाङे ठमेलका ड’नका रुपमा चिनिन्छन् । कुनै समय उनलाई शेयर नदिई ठमेलमा व्य’वसाय नै गर्न नसक्ने अवस्था थियो । च’क्रे मिलन र उनको स’मूहबीच झ’गडा हुँदा उनकै निर्देशनमा चक्रेको हात का’टिएको थियो । जून मु’द्दामा उनी दो’षी ठ’हर भएका थियो ।
उनीवि’रुद्ध सम्पत्ती शु’द्धीकरण मु’द्दा समेत दा’यर भएको थियो । एक समय था’रु क’ल्याणकारी पा’र्टीमा प्रवेश गरेकोमा बैठकमा एक नेतालाई नै ला’त्तीले हा’नेको घ’टनामा समेत प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर मु’द्दा चलाएको थियो ।राप्रपा पृष्ठभुमीका उनी पछि कांग्रेस हुँदै २०७४ सालको नि’र्वाचनमा एमालेको स’मर्थनमा मनाङबाट चु’नाव जि’तेका थिए ।
नेपालको राजनीतिमा अ’परा’धीक पृ’ष्ठभुमीका व्य’क्तिहरुको ब’चश्व बढ्दै गएको छ भने इ’मान्दारहरु पा’खा ला’गेका छन् । जसकारण देश पूरै मा’फियाको हातमा पुगेको छ ।दृष्टि बाट